Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်)
Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အောက်ပါအခြေအနေတွေကို ယာယီသက်သာစေရန် သုံးနိုင်ပါတယ်။
အအေးမိခြင်း သို့ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်စေသောအရာတွေကြောင့် မပြင်းထန်တဲ့လည်ပင်း၊ လေပြွှန်ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ချောင်းဆိုးခြင်း
Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
မသုံးခင်မှာ ပုလင်းကိုသေချာခါသင့်ပါတယ်။ တိုင်းတာတဲ့ခွက်နဲ့သာ တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။ အခြားပစ္စည်းဆေးတွေ ထည့်မသုံးသင့်ပါဘူး။ ညွန်ကြားစာမှာပါတဲ့အတိုင်း သို့ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း သုံးသင့်ပါတယ်။
Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Robitussin® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
monoamine oxidase inhibitor (MAOI) ( စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ရောဂါနဲ့ ခံစားမှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်) အသုံးပြုနေရတယ်ဆိုရင် သို့မဟုတ် MAOI drugဆေးဖြတ်လိုက်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်သောက်ရမယ့်ဆေးမှာ MAOIပါမပါမသိဘူးဆိုရင် အသုံးမပြုခင် သင့်ဆရာဝန်သို့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အာရုံထားဂရုပြုလောက်အောင်မရှိပါဘူး။
ဆေးကိုသင့်ခန္ဓါကိုယ်ကရင်းနှီးသွားတဲ့အခါမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုမဖြစ်အောင် လျော့နည်းအောင်ကုူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သို့ သင်စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သုူတွေနဲ့စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
10 mL ၁၂နာရီခြားတစ်ကြိမ် ၊ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီအတွင်း 20 mLထက်ပိုမသုံးသင့်ပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
5mL ၁၂နာရီခြားတစ်ကြိမ် ၊ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီအတွင်း 10 mLထက်ပိုမသုံးသင့်ပါဘူး။
2.5mL ၁၂နာရီခြားတစ်ကြိမ် ၊ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီအတွင်း5mLထက်ပိုမသုံးသင့်ပါဘူး။
Robitussin (ရိုဘစ်တက်ဆင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Robitussin ၁၂နှစ်နာရ်ီ ချောင်းဆိုးသက်သာဆေး3OZ (89ml)